Fanapahana laser amin'ny metacrylate, safidy tsy mampino amin'ny karazana endrika | Famoronana an-tserasera
Raha toa ianao mpidoroka endrika sary, mety efa nahatsapa ny mila mahita ny zavatra noforoninao tonga nofo. Toa sarotra sy lafo ity, nefa ny tena izy dia misy fomba tsotra sy tsy dia lafo manamboatra azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantariko anao ny iray amin'ireo teknika ireo, tHiresaka momba ny fanapahana laser methacrylate aho, momba ny tombony sy ny zavatra mety arosony ho an'ny mpamorona sy ny endrika.
1 Inona no atao hoe fanapahana laser amin'ny methacrylate
2 Raiso mora sy haingana ny volanao amin'ny methacrylate
2.1 Tohano, vita ary loko maro loko
3 Ahoana ny fanomanana ny volavolanao amin'ny fanapahana laser methacrylate
4 Karazan-drafitra inona no azoko alefa?
Inona no atao hoe fanapahana laser amin'ny methacrylate
Ny fanapahana laser amin'ny metacrylate dia fomba iray anaovana izany laser iray mamaky ny fitaovana mampiakatra ny mari-pana mandra-piempo sy mandalo. Ny laser dia alefa avy amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa manaraka ny baikon'ny solosaina izay ametrahana ny volavolan'ny mpanjifa.
Farany, apetraka ny etona voatsindry hanesorana ilay notapatapahina. Ny valiny dia madio, marina ary voadio.
Ity teknika ity dia manana tombony maro, maha-voalohany ny fahaiza-manao lehibe. Io dia mamela ny fanapahana karazana endrika rehetra, noho izany azonao atao ny manamboatra endrika methacrylate izay mety ho eritreritra: taratasy, afisy, rojo vy ... Ankoatr'izay, mifanaraka amin'ny habe rehetraKa tsy maninona na dia kely aza ilay sombin-javatra ilainao, mbola ho tsara be ny vokany.
Es fomba tena ekonomika miaraka amin'ny famaranana matihanina. Amin'ny laser manapaka ny hatevin'ny fitaovana dia mety ho manify, na dia mazava ho azy aza arakaraka ny fihenan'ny hateviny no hampihenana azy ny fizotrany mba tsy hihena ny kalitao.
Saingy, tsy isalasalana, ny tombony lehibe indrindra methacrylate tamin'ny laser tapaka ho an'ny mpamorona sy mpamorona izany ny fahatsorana ahafahanao manao ny baiko. Amin'io lafiny io, ny orinasa Rotula Tú Myelf dia manolotra serivisy ahazoana aina sy haingana ho an'ny mpanjifa, mamela izany fikirakira ny lamina an-tserasera ary avy hatrany miaraka amin'ny fitaovana fanaovana teti-bola tena ilaina.
Raiso mora sy haingana ny volanao amin'ny methacrylate
Mametraka ny kaontinao amin'ny fidirana Rotula Yourself amin'ity rohy ity y tonga dia mahazo ny vidiny marina ho an'ny volanao misaotra ny fitaovany amin'ny teti-bola.
Tsotra be mila manaraka ireto dingana manaraka fotsiny ianao:
Ampidiro amin'ny SVG ny volanao.
Raha te hanonta litera ianao dia azonao atao ny manampy ny lahatsoratra ao anaty boaty "ny lahatsoratrao".
Afaka misafidy ny endri-tsoratra tianao sy ny haavon'ny lahatsoratra ianao.
Mametraka ny haavon'ny ampahany.
Farany, safidio ny maody mifatotra, ny famaranana ary ny loko.
Tsindrio ny fampiharana fanovana ary hahazo topi-maso sy ny daty handraisanao ny kaominao ianao.
Tohano, vita ary loko maro loko
Mety tsy dia mahay loatra amin'ny fitaovana ianao, na mety tsy afaka manamboatra ny mari-pamantarana akrilikao amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny fandavahana. Aza matahotra! Label Yourself dia manome ny mpanjifa fahafaha-misafidy ny maody mifatotra mifanaraka indrindra amin'izay ilainao. Azonao atao ny mangataka ny famolavolana anao miaraka amin'ny dity mahery sy ilaina hanamboarana azy amin'ny karazana faritra rehetra.
ihany koa azonao atao ny manapa-kevitra hoe izay famaranana tianao. Manome anao ny fahazoana famantarana mangarahara izy ireo, mainty, fotsy, misy vokany fitaratra, misy faran'ny matte (ny loko tadiavinao), miaraka amina famaranana manjelanjelatra na vita pirinty. Mazava ho azy fa azonao atao ny mamaritra hoe inona no loko tianao hananana ny volanao, amin'izany apetraho eo am-pelatananao ny loko maro loko:
Pantone: torolàlana miloko midadasika fantatra amin'ny kaody. Hanampy anao hahita mora ny loko orinasa izany.
NCS: Natural Color Rafitra, ny rafitra miloko fampiasan'ny matihanina indrindra amin'ny hosodoko indostrialy. Eto ianao dia hahita loko pastel tena mahaliana sy feo maivana.
RAL- Rafitra fampifanarahana loko miloko eropeana, matetika ampiasaina hamaritana ny lokon'ny plastika sy ny firakotra.
Ahoana ny fanomanana ny volavolanao amin'ny fanapahana laser methacrylate
Si manana famolavolana amin'ny mpanao sary ianao ary te-hanomana izany ho an'ny baikonao ianao mila mijery fotsiny ianao rehefa mitahiry azy. Hamarino tsara fa mitahiry ny rakitra ao amin'ny SVG (sary vektor ilaina), mba hahafahanao mampakatra azy amin'ny Internet ary tsy hanana olana amin'ny fametahana azy izy ireo.
Araka ny hitanao, ny serivisy atolotra dia a safidy mety indrindra ho an'ny olona mamorona sy mpamorona izay te hahita ny endrik'izy ireo mivadika ho singa ara-batana nefa tsy manasarotra ny fiainany.
Karazan-drafitra inona no azoko alefa?
Azonao atao ny mandefa saika karazan-drafitra rehetra. Araka ny efa noresahintsika tato amin'ity lahatsoratra ity, ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fanapahana laser methacrylate dia ny fahaizany rehetra, ka ... Araraoty ny fahaizanao mamorona ary mamorona zavatra tsy mampino!
Handao anao aho manaraka misy hevitra izany dia afaka manome aingam-panahy. Azonao atao ny mamorona:
Logo na sary 3D
ireo ohatra fotsiny, fa ny fetra dia napetraky ny eritreritrao. Ny fitaovana fandefasana an-tserasera mandeha ho azy dia tena mahomby sy mety, saingy raha manana fisalasalana ianao amin'ny amin'ny mety hahatanteraka ny volavolanao na raha te-hangataka zavatra manokana kokoa ianao (ohatra raha tsy ao anaty programa ny font anao na raha manana olana ianao amin'ny fampidirana ny endrikao) dia azonao atao foana ny mampiasa ny boaty fanampiana azo amin'ny ilany havia amin'ny tranonkala. Izy ireo dia hampifandray anao amin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa ary ho afaka hamaha ny olanao rehetra ianao.
Inona no andrasanao hanao ny baiko voalohany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny fanapahana laser amin'ny metacrylate, safidy tsy mampino amin'ny karazana endrika rehetra